Otu Email Marketing Mgbu ... 10 Afọ Mgbe e mesịrị. | Martech Zone
Otu Email Marketing Mgbu… 10 Afọ Mgbe e mesịrị.
Tuesday, October 18, 2011 Tọzdee, Septemba 19, 2013
M kụrụ okporo ụzọ gara aga leta a Delivra ahịa na-ekwu na etù eMarketing ihe omume na Providence, RI. Ihe m mụtara bụ na ndị ahịa email a nwere otu nsogbu ha mere afọ iri gara aga mgbe m bidoro azụmaahịa a. N'agbanyeghị ọganihu nke teknụzụ na nnabata, ndị na-ere ahịa n'ezie na-agbasi mgba ike kwa ụbọchị site na iji usoro atumatu ụlọ, njikọ aka, mmụba, mgbapụta, ọnụego emeghe na usoro ndị ọzọ dị mkpa nke email. Anọ m na otu panel banyere usoro esi eme usoro iwu ụlọ yana ọnụ ụlọ jupụtara ...
Nnukwu ozi, ma e jiri ya tụnyere ebe anyị nọ 10 afọ gara aga, bụ na enwere nnukwu ihe ọmụma, ọnụ ọgụgụ na nka iji nyere aka dozie nsogbu ndị a. Ọtụtụ mgbe, ihe m, achọpụtara bụ na ndị na-ere ahịa email maara ihe, ha maara ihe n'ezie. Ha nwere ihe omuma na atumatu iji meputa nnukwu ochichi email; ha choro ihe kariri ka obu ego, ndi oru ma obu oge.
M na-achọ ịmata ihe si na otu a… kedu isi ihe mgbochi ị na - eche ihu na mmemme email gị? Ọ bụ:
Chepụta Email-Enyi na Enyi